Xilliga Codka kalsoonida loo qaadayo Golaha Wasiirada oo la shaaciyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xilliga Codka kalsoonida loo qaadayo Golaha Wasiirada oo la shaaciyay
Xilliga Codka kalsoonida loo qaadayo Golaha Wasiirada oo la shaaciyay
maalinta berito oo Sabti ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ay u codeyndonaan Xukuumadda Cusub ee uu dhawaan soo Magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Barnaamijka Xukuumaddasi ay fulin doonto.
Kulanka beri ee Golaha shacabka ayaa ah mid codka kalsoonida ah loo qaadi doono Golaha wasiiradda Magacaaban .
Berito ayaa waxa loo badinayaa in xildhibaanada Golaha shacabka ay codka Kalsoonida ah ay u qaadan Xukuumadda Rooble oo ay ku badan yihiin Xildhibaanada Barlamaanka .
Maqaal horeFaahfaahinta Dagaal dhexmaray Al-Shabaab & Ciidaanka Xooga Dalka.
Maqaal XigaGuddoomiyaha Xisbiga Wadani ee Somaliland oo laga helay Xanuunka Covid-19